IFTIINKACUSUB.COM: ​Hadii daacad nimo la doonaayo ,Madaxwayne kasta waa in ay la dhaartaan Qabiilkiisu!
​Hadii daacad nimo la doonaayo ,Madaxwayne kasta waa in ay la dhaartaan Qabiilkiisu!
Way adag tahay ama suura galba maaha in Madaxwayne ay umadi dooranayso in ay ka fara-madhnadaan qabiilkiisu ,waxa aan caad inaga sarnayn in Madaxwayne kasta oo aynu doorano qabiilka iyo qolada uu ka dhashay ay tahay awooda kaliya ee ugu horaysa ee uu isku halaynaayo.
Waxaa jira waxyaabo aad u farabadan oo ku kalifaaya in ninka Madaxnimada doonayaa uu ka codsado qabiilka iyo qolada uu ka dhashay in ay u damaanad qadaan in ay door muuqda ku yeelanayaan doorashadiisa,kuwaasi oo u huraaya naf iyo maalba.
Waxa aad in badan suuqyada ka maqlaysaa hadalo ay ka mid yihiin "xiligii aanu anagu madaxnimada haynay ,waxaaanu ahayn kuwo dalka iyo dadkaba hormariyay " qofka sidaasi u hadlayaa waxa kaliya ee uu u jeedaa waxa ay tahay in uu ku faano , wakhti uu Madaxwayne ahaa nin isaga ay isku qabiil ahayeen.
Mushkilada hada ina haysata aya waxa ka mida,qabiil ninkisii tageeraaya,hadana hadhaw doonaaya in ay ka baxsadaan danbiyadii uu umada ka galay ,si taasi aanay u dhicin waa in aynu hada waxkasta isu cadaysanaa oo aynu madmadawga isaga baxnaa.
Waxa aan ku talin lahaa Madaxwayne kasta waa in ay xiliga xilwarejinta la dhaartaan qabiilkiisu sida ,Suldaanada,Culimada ,Tijaarta iyo dhamaan waxgaradka kasoo jeeda beesha uu yahay,